Rinith गर्भवती महिलाहरू
असामान्य भस्मोटर रासमोटर ग्रेट मुठेसाइस विभिन्न बाहिरी र आन्तरिक उत्तेजनाको जवाफमा शरीरको बढ्दो अनुभवको उल्लंघनको उल्लंघन गरिएको छ।
hyperrtrophic Rhinitis अन्तर्गत, तिनीहरू तल्लो को विकास र मध्य नाली शेल को कम डिग्री बुझ्न। यद्यपि त्यहाँ तल्लो नाक शेलहरूको हड्डीको भागको बढ्दो पनि छन्।
एक्टजेनिक (बाह्य) र आन्तरिक) उत्तेजक (आन्तरिक) उत्तेजकको प्रतिक्रिया पैदा गर्दै।
बाह्य उत्तेजना समावेश गर्नुहोस्: चिसो, गन्ध र अन्य चिल्लो, धुवाँ, मौसम-स्कार्सहरू, विभिन्न औषधिहरू (VASOCOonStrics, हाइपोस्ट्रन्ट्स)।
भित्री उत्तेजनामा ​​हार्मोनल डिस्फ्यूनीकरण (उदाहरणका लागि गर्भावस्थामा गर्भावस्थामा), एडिपोरिन ग्रन्थीहरू (हाइपोथियोरोइडवाद, आदिका विभिन्न रोगहरू), शारीरिक र मनोवैज्ञानिक भार।
nccosa को जलन, नाक र नास्पपेनरीनक्स (नास्पपेनरीनक्स, एडेनपोज, आदि) को गुलाब को आन्दोलन मा हुन सक्छ।
hypertrophic rhinitis को विकास नाक गुहा र लामो-चित्ताको सामान्य रोगहरु को सामान्य रोगहरु को विकारहरु को लागी योगदान भोस्कोन्जन र आदानप्रदान ड्रग्स, विभिन्न हानिकारक वातावरणीय कारकहरूको प्रभाव।
महिला हर्मोनहरूको अवधि, महिला हर्मोन्स र प्रसारण रगतले periferal टिशू
। यस्तो परिवर्तन गर्न। तसर्थ, तिनीहरूको आकारमा वृद्धि छ, जसले गर्भवती महिलाहरूको फनलिटिसलाई लैजान्छ। / LI> :
फरिन्टेन महिलाहरूको राइनिटिसले विभिन्न राइनिन्टिटिसको संख्यामा छुट्टै ठाउँ ओगट्छन्। यो पैतृकता एक भावी आमाको जीवन एकदमै बिग्रन्छ, र प्रयोग गर्ने सामान्य तरिका निषेध गरिएको छ - यसले बच्चाको स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउन सक्छ। तिनीहरू यस दुर्भाग्यबाट प्राय जसो मरेकाहरूमा धेरै टाढाका छन्। पहिले नै गर्भवती महिलाको 400% सम्म।
यस स्थितिमा अर्को सहायक नेवार छ। क्षारीय खनिज पानीका साथ इनहेलेसन एकदम राम्रो प्रभाव हो (ग्यास बिना पानी आवश्यक छ)।
यदि यी प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्दै, गर्भवती महिलाको अवस्था सुधार हुँदैन, र नाक जागिर हरेक दिन बढाइन्छ, त्यसपछि एक विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
अल्टिंग महिलाको राएसिनिसिटिसहरूको संयोजन, अपर्याप्त अक्सिजन प्रवाहको साथ, थकान, बारम्बार ओरिभ। , निद्रा बिरामी, यो निश्चित रूपमा, भ्रूण को विकास लाई असर गर्न सक्छ।
थप, एलर्जी राइनिटिटिसको उपस्थिति गर्भावस्थाको बखत महिलामा खर्दन गर्न सम्बन्धित छ (एक सपनामा सास फेर्दै), जसले धमिलो हाइपोर्टियालाई रोक्दछ, जसले धमिलो हाइपोर्टियालाई रोक्दछ, जसले धमिलो हाइपोर्टियालाई रोक्दछ, जसले धमिलो हाइपोर्टियालाई रोक्दछ। एग्गी मापनमा भ्रुण विकास र कम सूचकहरू। / LI> :
गर्भवती महिलाको रिनाथ - एक रोग नाक निर्माण र डिस्चार्ज, टर्मिटल वा अन्य कारणहरूको संकेत बिना
यो राज्य गर्भावस्थाको कुनै पनि टेटिटरमा हुन सक्छ र सामान्यतया डेलिभरी पछि2हप्ता भित्र जान्छ।
नाटा-नाक भीड गर्भावस्थामा धेरै बारम्बार समस्या हो जुन विभिन्न कारणहरूले उत्पन्न हुन सक्छ। विभिन्न स्रोतका अनुसार गर्भवती महिलाहरूको राइनालिसले -4-40% केसहरूमा फेला पर्यो, र पछिल्लो अवलोकन मध्ये एकमा, सबैभन्दा राति राइनिटिटिस 8 टेटिटरमा अवलोकन गरिन्छ (। 38 । 1,000 गर्भवती महिलाको%, जो 1 र2मा कुनै समस्या थिएनन्।
गर्भवती राइनिनिटिस गर्भावस्थाको क्रममा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ, जुन विशेष गरी his ट्रिमेन्टरमा ट्रान्सफर गर्न गाह्रो हुन्छ।
त्यसैले, यो रोगको उपचारको साथ रोगको उपचार गर्नु आवश्यक छ। बच्चालाई धोका दिँदा प्लेसेन्टाले उत्पादन गरेको महिलाको जीवनको विशेष अवधि हो। गर्भावस्थाको समयमा महिलाहरू भ्यासामोटर राशिनिटिस, सायद गर्भावस्था, र गर्भावस्थालाई बलियो बनाउन सकिन्छ। यस विषयमा कुनै नयाँ असुरक्षित सन्देशहरू छैनन्। Vasomotor rhinitis। ओटरेनिन्डिंगलोजीको फोरम प्रश्नहरूमा। केटीहरू नमस्कार!
<< p> 37, गर्भावस्थाको बखत भ्यासमॉमोर राएनिटिटिसको सबै कारणहरू नमाल र नाक चल्ने नाक बाहिर निस्किन्छ?
ले शब्द सुनेका "Vasomotor rhinitis" (ITINININTER Rhin) vasomotor rhinitis आधा गर्भवती महिलाहरु मा अवलोकन गरिएको छ। गर्भावस्थाको बेला, धेरै औषधि डाक्टरहरू प्रयोग गर्छन् तपाईं कसरी बचाउनुहुन्छ र के?
<< p> मेरो व्यक्तिगत क्यालेन्डर इक्वाराको गर्भावस्थाको समयका लागि व्यक्तिगत सहायक हो। गर्भावस्थामा प्रश्नहरू। गर्भावस्थाको क्रममा रिन्टिटिस, किनकि यदि अचानक यदि जड र नाक, वा भौसोमोटर Rhinitis लिन थाल्यो भने। र म पश्चाताप गर्ने गुटलिसले गर्भावस्था परिष्कृत बखत भ्यालेमोटर राहिनिटिसलाई सताइरहेको छ जुन गर्भावस्था परिष्कृत, लाभदायक, फोरम, तपाईंले केहि पाउनुहुनेछ। शीर्षकमा जवाफ दिनुहोस्:
एलर्जी र (वा) भ्यासामोटर राशिनिटिस गर्भवती महिलामा। भास्मोटर राइनिनिटिस गर्भावस्था भन्दा पहिले भासी हुनसक्छिन्, जुन बसमा शरीरको काममा पुनर्संरचना हुन्छ। नतिजा स्वरूप, गर्भावस्थाको क्रममा यस्तो रोग हुन सक्छ, उम्मेदवार कानूनी रूपमा छ, त्यहाँ कुनै समयमा होईन। तपाईं खोज ईन्जिन फोरम स्वास्थ्य
r। । अलेशीना, d। । आन्तरिक औषधि विभाग, स्नातकोत्तर शिक्षाको विभाग, लुगानक राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय
<< p> टी-द्रष्टाको संख्या बढाउने दिशामा टी-लिम्पिहोलिकासाहरूको पुनर्गठन सेलुयरी शुद्धता कम गर्ने दिशाको पुनर्संरचनाको साथ सेलुरियर प्रतिर्मको प्रकार्यलाई उल्लेख गरिएको छ, र यो दमन th औंबाट रहन्छ G2 औं चमत्कार गर्न। टी कोषहरूको दमनकारी प्रभावको उन्मूलन th 37 औं हप्तासम्म सुरु हुन्छ र बच्चाको जन्मबाट सुरु हुन्छ (बच्चाको स्पिलकुक V., 23; іuvutu l. 200; एस, 200 2006; SISKIIIVEVVW L., 200 2007)।
गर्भावस्था भनेको एक आरामदायी प्रतिस्पर्धी हो, जुन शरीरको समर्थक-भग्नावशक्ति प्रतिक्रियाहरूको उत्पीडनको साथ हो, जसले भ्रुण (सिंह n., 200 2008) को सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ।
<< p> प्राकृतिक रूपमा, गर्भावस्थामा, सम्भावित एलआरजीन्स (एज) को साथ, गर्भवती महिलाहरूको Xenob गोलीबाज सहित, उनीहरूको बुवान्सफोर्टिक्सका बारे मा एक महिलाले गर्भवती महिलाहरू सहित कम र व्याकुलताका साथ। यी कारकहरू कलेजोको रोगका लागि अधिक प्रतिकूल हुन्छन्, महिलाहरूमा मृगीतहरू बोझिएका एलर्लग्युजिकल वंशानुगत रूपमा वा पहिले नै गठन गरिएको एजसँग। अश्लील आमाबाट स्थानान्तरणको दुई तरिकाका लागि - एम्निस र प्लेसेन्टा मार्फत।
भ्रुणको एडेनीटिक फ्लेशमा इनहेलेसन र फूड हाइपरहरूको उपस्थिति गर्भधारण 1 16 औं हप्तादेखि फेला पार्दछ, र भ्रुणको गतिरोधमा - from 37 औं हप्तादेखि।
Vasomotor rhinoitis नाक गुहाको शून्य झिल्लीको रोगीय कार्य, जसमा सबै चिन्हहरू, तरल पारदर्शी डिस्चार्जहरू छन्, तरलताको पारदर्शी डिस्चार्जहरू। सामान्यतया दोस्रो वा तेस्रो त्रैमासिकमा देखा पर्दछ, तर त्यहाँ रोगको विकासका घटनाहरू छन् र यसभन्दा अघि।
vasomotor rhinitiss को एक सानो रक्त नली को कटौती को एक अवरोध को कारण हो जुन नाक टिश्यूलाई खुवाउँदछ। गर्भवती महिलामा त्यस्तो परिवर्तनहरू हर्मोनल पेरेस्ट्रोका कारण हुन्छन्, यसले रक्तचार्ज तरल पदार्थबाट वर्तमान तरल पदार्थ र सम्बन्धित क्लिनिकल चित्रको विकासलाई योगदान पुर्याउँछ।
Vasomotor Rhinoitis गर्भावस्थाको क्रममा एष्टपारोफोजेनेस र प्रवाह द्वारा विशेषता हो। यो मूल रूपमा रोगजनक माइक्रोफोराको प्रजननसँग सम्बन्धित छैन, एलर्जीनको एक झुकाव कार्यको कारणले छैन। काउसल कारक महिला भित्र छ, र यसले अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन।
प्रत्येक रोगको रूपमा, वीस्मोटर राहिनिटस ट्रान्सजर्स - कारकहरू विकास प्रक्रियालाई असर गर्दैन, तर रोगशास्त्रको गठन गर्न योगदान पुर्याउँछन्। यी समावेश:
यस अवस्थामा गर्मगार राशिनिटिसको इथियोशास्त्र एकदम धमिलो भएको छ, त्यो हो भने, यस कारणले यो रोगको पक्षलाई हटाउँछ। लक्षणहरू, कारण होइन।
<< p> अन्तिम सुविधा प्राय: माध्यमिक संक्रमणको पहुँचमा जान्छ, कुन चरित्र सूजनमा परिवर्तन हुँदैछ।
यस मामिलामा, केहि समय पछि, गर्भावस्थाको समयमा कुनै महिलाले नशाको स with ्केत गर्दछ, दुर्लभता र निगल र कुराकानीमा। स्पुजुयम, स्लि uchumpling बिल्डिंग बिना खोकी छ।
पर्याप्त उपचारको अभावमा सूक्ष्मजीवहरूको लायकग्राइजहरूको प्रजनन बिना क्लिनिकल तस्वीरलाई थप मेटाबोलिक्स प्रक्रियाहरूको लागि अक्सिक्स्क्सियाको अभावका लक्षणहरू सम्पादन गरिन्छ।
गर्म महिला गन्दै गर्म ग्रेनिट अफ गर्म महिलाको विशिष्टता पनि नाकका नाक द्वारा वैकल्पिक रूपमा हो, विशेष गरी झूट बोलीमा मूर्त रूपमा।
: << p> rinith गर्भावस्थाको क्रममा एकदम सामान्य घटना हो। महिलाको प्रतिरक्षा उल्लेखनीय कमजोर छ र यस कारणले शरीरको सुरक्षात्मक शक्तिहरू कम पारिरहेको छ। गर्भवती महिलाहरूको राइनको उपचारको लागि, एक विशेष सावधानी उपचार गर्न आवश्यक छ, जब सामान्य औषधिले बच्चाको स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउन सक्छ।
संकेतहरू र रोगहरूको लक्षणहरू
सबैभन्दा सामान्य रननी नाकलाई चरिटिटिस भनिन्छ। यो रोग नाक परिच्छेदहरूको उपन्यास उखुचाइनको सूजन हो। यो नोमनहरू हो जुन एलर्जी वा अर्वीको मुख्य लक्षण हो। गर्भावस्थामा रबर एकदम सामान्य घटना हो।